Beach Front Seaside Retreat. I-Wi-Fi yasimahla kunye nokuPaka.
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguNeil
Wamkelekile kwindawo yethu yokubuyela elwandle eGoring-by-Sea, kufutshane nedolophu yaseWorthing. Indawo yethu yomgangatho ophantsi we-annexe suite ibekwe ngokugqibeleleyo kumda wolwandle ekupheleni kwendlela yokuhlala ezolileyo. Emva kokuba uhlaziywe ngokupheleleyo, i-annexe inokwamkela abantu aba-2-4. Inomnyango wabucala owahlukileyo, ibhedi enkulu eyi-5 ', ibhedi yesofa ephindwe kabini, kunye negumbi lokuhlambela elisanda kufakwa. I-Wi-Fi ekhawulezayo yasimahla kunye nendawo yokupaka ngaphandle kwendlela inikezelwe kwaye kukho iparade yokuthenga yasekhaya kufutshane.
Sifuna ukuba uhlale kamnandi kwaye ukholelwe ukuba ngeli xesha ulapha, eli likhaya lakho nangona uhlala ixesha elide kwaye uya kuphumla kwaye ukhululeke.
I-annexe ifikeleleka ngesango elisecaleni kwaye inomnyango wayo wangaphambili wabucala. Ixhamla kwipokotho esemgangathweni ephuma kwibhedi enkulu eyi-5', ibhedi ephindwe kabini, igumbi lokuhlambela elisanda kufakwa, iTV efakwe eludongeni, itafile enezitulo ezine, imicrowave, ifriji, iketile kunye netoaster. Kukwakho nomgangatho omtsha kulo lonke.
Siye sazama ukuxhobisa i-annexe yethu enemixholo yolwandle ibe kumgangatho olungileyo kakhulu kwaye silindele iimfuno zakho ngokubonelela ngazo zonke izinto onokuthi uzifunele ukuhlala kamnandi. Zonke ilinen yokulala, iitawuli, izinto zangasese ezisisiseko, isisomisi seenwele, iphepha lendlu yangasese kunye nokukhethwa kwezinto zasekhitshini zilungiselelwe iindwendwe zethu ngexesha lokuhlala kwazo (kubandakanya iti, ikofu kunye neswekile)
I-ayina ibhodi, iayini kunye nesitulo esiphezulu ziyafumaneka xa uceliwe.
IGoring Greensward, ejongene ngqo nepropathi, yindawo entle yokuya kwipikiniki, ube ne-BBQ, udlale imidlalo, uqubhe kumanzi iflegi eluhlaza ukusuka kunxweme olukufuphi okanye uhlale phantsi uphumle. Izitulo ezisongayo ziyafumaneka ukuba uziboleke kuthi ukuba ziyafuneka.
Ixesha lokungena liqala ngo-3pm. Ngamanye amaxesha singalungiselela ukungena kwangethuba, ngoko ke nceda uqhagamshelane nathi ukuba ujonge ukufika kwangethuba kwaye siya kwenza konke okusemandleni ethu ukukulungiselela. Indawo yokupaka iya kufumaneka kuwe kwidrive yethu ngqo ngaphandle kwe-annexe, ukuba iyafuneka.
Iindwendwe ezininzi ziya kufika ngaphambi kwexesha elimiselweyo lokungena, iindaba ezimnandi zezokuba kuninzi ekufuneka kwenziwe. Sihlala sicebisa ukuba iindwendwe zindwendwele ivenkile kwaye zenze ivenkile encinci. Oku kuya kukunika ixesha elininzi lokuphumla xa sele ungenile. Kukwakho neendawo zokutyela ezilungileyo kunye neendawo zokutyela ezikufuphi ezenza isidlo sasemini, kutheni ungaphumli kwaye wonwabele kwiindawo zokutya zalapha!
Ukuba uhamba ngololiwe, isikhululo sethu esikufutshane yiGoring-by-Sea. Izikhokelo ezingaphezulu malunga nendlela yokufikelela kwipropati ziya kunikwa, nje ukuba ubhukisho lwakho luqinisekisiwe.
Ixesha lokuphuma ngu 11am. Ukuba ufuna ukuphuma emva kwexesha, siya kwenza konke okusemandleni ethu ukukulungiselela ukuba uyasazisa xa ubhukisha. Ukuba sineendwendwe ezifikayo ngaloo mini. kusenokungenzeki ukunika isheke kade njengoko i-annexe iya kufuneka icocwe kwaye ilungiselelwe iindwendwe zethu ezilandelayo.
Sithatha amanyathelo awongezelelekileyo okucoca nokucoca iindawo ezihlala zichukunyiswa phakathi kogcino-ndawo, silandela imigaqo ye-Airbnb eyomeleziweyo yokucoca.
Ukuzihlola ngokwakho kunye nokuphuma kukwakhona ukuba kuyafuneka.
4.96 · Izimvo eziyi-96
Isitalato esiphakamileyo sasekhaya, iGoring Road, sifunyanwa kumgama omfutshane (malunga ne-15 min uhamba emantla epropathi) apho kukho iivenkile ezahlukeneyo, iikhefi, indawo yokuhamba (nokuhanjiswa), izinto eziluncedo kunye namakhonkco ezithuthi zikawonke-wonke.
I-'Sea Lane Cafe' eyaziwayo inokufumaneka kunxweme olujikeleze ikona, ivule imini yonke ibonelela ngeziselo ezahlukeneyo, ukutya okushushu kunye nokubandayo, ii-ice creams kunye nokhetho olumangalisayo lweekeyiki!
Ungahamba okanye uhambe ngebhayisekile ecaleni kwepromenade, empuma ukuya kwiziko laseWorthing, i-pier kunye neziko lokuthenga. Ukuhambahamba ukuya ngasentshona kukuthatha usiya kwiilali zaseFerring, eMpuma Preston naseRustington.
IWorthing yeyona dolophu inkulu yolwandle eWest Sussex emi kunxweme olumangalisayo lweSussex kunye neSouth Downs entle emantla.
Idolophu ibekwe ngokulula phakathi kwamaziko enkcubeko eBrighton naseChichester.
IGoodwood, edume ngomdyarho wamahashe i-'Glorious Goodwood' kunye nemidlalo yayo yemoto efana 'noMnyhadala wesantya' kunye 'neMvuselelo', ikwafumaneka kufutshane neChichester.
ILondon, iPortsmouth kunye neSouthampton inokufikelelwa ngokulula kakhulu ngeenkonzo zikaloliwe eziqhelekileyo, ezibaleka kuyo nayiphi na indawo eWorthing izikhululo zikaloliwe ezintlanu.
Idolophu eyimbali yentengiso yase-Arundel enenqaba yayo yamandulo, i-cathedral enomtsalane, iivenkile ezithengisa izinto ezinqabileyo kunye nomlambo onikezela ngohambo ngesikhephe kumgama oziikhilomitha ezisi-7 kuphela.
Ulwandle olunomtsalane oluthatha iimayile ezili-10 ukusuka eShoreham ukuya eLittlehampton luseyenye yezinto ezinomtsalane ezinkwenkwezini ezibonelelwa yi-promenade enomtsalane. Oku kwenza ukuba i-Worthing isoloko ithandwa ngabantu abahamba ngeeholide kunye nabakhenkethi bemini ngokufanayo nabathatha ithuba lendawo yedolophu, iBanga lesi-II lesakhiwo esidweliswe kwisakhiwo esinendawo yolonwabo. Le pier ibizwa ngokuba 'yiPier of the Year' nguMbutho weSizwe wePiers kwizihlandlo ezibini, kutsha nje ngo-2019.
I-Worthing yindawo entle yokuhlala enoluhlu olubanzi lwesitayile sepropathi kwaye inazo zonke izinto onokuzilindela kwidolophu enkulu enabemi abamalunga ne-100,000.
Idolophu ibandakanya indawo yokuthenga yabahambi ngeenyawo yanamhlanje ebonelelwa kakuhle luluhlu oluhle lweevenkile, iivenkile zokutyela kunye neebhari.Ukhetho olubanzi ngakumbi, yiya eBrighton ukutyelela iChurchill Square kunye neBrighton Lanes.
Ukuzonwabisa kunye nokuzonwabisa kukwayinxalenye ebalulekileyo yobomi obuBonelekileyo eneendawo ezininzi ezineenjongo ezininzi zethiyetha, umculo kunye nomdlalo ohlekisayo, iicinema ezimbini, imyuziyam nokunye okuninzi. Kukwakho namaziko amathathu olonwabo, indawo yokuqubha yale mihla, indawo yokudlala igalufa, iinkundla zentenetya, iibhola zokujula, i-go-karting kunye neepaki ezahlukeneyo. Ukuloba, ukusefa emoyeni, ukukhwela kwi-surf, ukusefa kwikhayite kunye nentlaninge yeminye imidlalo yasemanzini zonke ziyakonwabela kule ndawo.Kukwakho neklabhu yeyacht yasekhaya.
Emantla edolophu kukho iSouth Downs equka itshokhwe ephantsi komhlaba enikwa iwonga lePaki yeSizwe. Apha ungafumana iiGadi zaseHighdown elikhaya kwingqokelela eyodwa yemithi enqabileyo kunye nezityalo, iHigh Salvington windmill kunye neCissbury ring. Le ndawo ikwabonelela ngeebhayisekile zeentaba, iparagliding, ukukhwela amahashe kunye nokuhamba okumangalisayo emaphandleni.
Njengababuki zindwendwe bakho, siyafumaneka kulo naliphi na icebiso okanye imibuzo onokuba nayo ngexesha lokuhlala kwakho, kungenjalo, siya kukunika ubumfihlo obupheleleyo kwaye sinciphise unxibelelwano lwethu ukujonga kwaye ujonge kuphela.